IArgentina, iColombia, iNamibia kunye nePeru, akufuneki ibe nezithintelo zokuhamba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IArgentina, iColombia, iNamibia kunye nePeru, akufuneki ibe nezithintelo zokuhamba
Oktobha 31, 2021
Ukulandela uphononongo phantsi kwengcebiso malunga nokunyuswa ngokuthe ngcembe kwezithintelo zethutyana kuhambo olungabalulekanga lokungena kwi-EU, iBhunga lihlaziye uluhlu lwamazwe, imimandla yolawulo ekhethekileyo kunye namanye amaqumrhu kunye namagunya emimandla ekufuneka ukuba kususwe izithintelo zokuhamba. Ngokukodwa, iArgentina, iColombia, iNamibia kunye nePeru zongezwa kuluhlu.
Uhambo olungabalulekanga oluya e-EU lusuka kumazwe okanye amaziko angadweliswanga kwisiHlomelo I luxhomekeke kuthintelo lohambo lwexeshana. Oku ngaphandle kokudlelelela ekubeni amazwe angamalungu anyuse imida yethutyana yohambo olungeyomfuneko ukuya kwi-EU kubahambi abagonywe ngokupheleleyo.
Njengoko kuchaziwe kwisindululo seBhunga, olu luhlu luya kuqhubeka luphononongwa rhoqo emva kweeveki ezimbini kwaye, njengoko kunokuba njalo, luhlaziywe.
Ngokusekwe kwiikhrayitheriya kunye neemeko ezibekwe kwisindululo, ukusukela nge-28 ka-Okthobha wama-2021 amazwe angamalungu kufuneka anyuse kancinci kancinci izithintelo zokuhamba kwimida yangaphandle kubahlali bala mazwe wesithathu alandelayo:
I-China, ixhomekeke ekuqinisekiseni ukuhambelana
Izithintelo zokuhamba kufuneka ziphakanyiswe ngokuthe ngcembe kwimimandla yolawulo olukhethekileyo lwase China Hong Kong naseMacao.
Ngaphantsi koluhlu lwamaqumrhu kunye namagunya emimandla awamkelwa njengelizwe lilungu elinye, izithintelo zokuhamba eTaiwan nazo kufuneka zisuswe kancinci kancinci.
Abahlali baseAndorra, eMonaco, eSan Marino naseVatican kufuneka bathathwe njengabahlali be-EU ngenjongo yesi sindululo.
Indlela yokumisela amazwe esithathu apho uthintelo lohambo lwangoku kufuneka lususwe yahlaziywa ngomhla wama-20 kuMeyi ka-2021. Ibandakanya imeko ye-epidemiological kunye nokusabela ngokubanzi kwi-COVID-19, kunye nokuthembeka kolwazi olukhoyo kunye nemithombo yedatha. Ukubuyisana kufuneka kwakhona kuthathelwe ingqalelo kwimeko-nye-imeko.
Amazwe anxulumene ne-Schengen (i-Iceland, i-Lichtenstein, iNorway, iSwitzerland) nayo ithatha inxaxheba kule ngcebiso.